I-China H Beam yoLwakhiwo lweSinyithi yoLwaziso loMatshini woQhushumbo kunye nefektri | Ding Tai
Umatshini woQhushumbo lweNtsimbi ye-Q69 Shot Blasting yokucoca iipleyiti
Singakwazi ukuyila size senze ubungakanani obahlukileyo bendawo yentsimbi yokuchwetheza ngokweemfuno zabathengi. Nceda uthumele iinkcukacha zakho kwi-imeyile yethu.
Olu hlobo lwento yokuqhushumba ipleyiti yentsimbi kunye nomatshini wokudibanisa uyile kwaye uveliswe ngokwamkela iinzuzo zeemveliso ezifanayo ezivela ngaphakathi elizweni nakwamanye amazwe. Inxalenye yokucoca inkunkuma (ukucoca ukuqhuma) yamkela ivili lokuqhuma elinamandla aphezulu kunye nohlobo olupheleleyo lwenqanawa eydibeneyo yokucoca isanti. Umatshini otshisayo wamkela ngokukhethekileyo ibrashi enamathela e-nylon ephezulu kunye noxinzelelo oluphezulu. Inxalenye yokutshisa kunye neyomileyo inokuthatha iindlela ezahlukeneyo zokufudumeza. Inxalenye yokutshiza yepeyinti isebenzisa indlela yokucinezela engenamandla. Iseti epheleleyo yezixhobo ilawulwa yi-PLC, kwaye sisixhobo esikhulu esipheleleyo sezinto eziphambili zakwamanye amazwe.
Lo matshini wokudubula wadubula kunye nomgca wokupeyinta ikakhulu usetyenziselwa ukunyanga umphezulu (oko kukuthi, ukuhambisa kwangaphambili, ukukhupha irusi, ukutshiza kunye nokomisa) kwepleyiti yesinyithi kunye namacandelo ahlukeneyo olwakhiwo, kunye nokucoca kunye nokomeleza kwamacandelo esinyithi.
Lo matshini usetyenziswa ngokubanzi kwi-Shipyard, kumzi-mveliso wokwakha iinqanawa, kumzi mveliso, njl.
Iimodeli kunye nokuchazwa kweplate yensimbi yepeyinti yokupeyinta yomgca:
Yinkonzo yeAntai enokunikezela ngayo?
1. Iinjineli zethu zinokusebenza ngokwahlukeneyo ngokweemfuno zoyilo lwabathengi bezixhobo. kwaye uthumele isiqinisekiso somthengi ukunceda abathengi ukugcina iindleko.
2. Ngexesha lokwenziwa kwezixhobo, senza ifoto kwimveliso, kwaye sithumela kumthengi ukuba alandelele inkqubela phambili.
3. Iinwele zeempahla ziya kuhamba, siya kuthumela amaxwebhu entsusa kumthengi (njengoluhlu lokupakisha, i-bill, i-CO, iFom E, iFom A, iFom F, iFom M, B / L njl.)
4. Sinokunika abathengi umzobo wesiseko samahala sesiNgesi, imizobo yokufaka, iincwadana ezinemigaqo, incwadana yolondolozo kunye nemizobo yeenxalenye.
5. Singathumela iinjineli zethu ukuba zifake kwaye zilungiswe phesheya, kunye noqeqesho lwasimahla lwabasebenzi kunye nolondolozo.
6. Sineseti yenkqubo yenkonzo yokuThengisela emva kwentengiso, isazisi siya kuthunyelwa kumthengi ngamnye, banokungena kule nkqubo bajonga lonke ulwazi ukuze bathenge izixhobo kunye namalungu ngayo. Sinikezela ngendibano yokubonisana nge-intanethi yeeyure ezingama-24.
1. Zingaphi iintsuku ekufuneka uvelise ngazo lo matshini?
Lo matshini wenziwe ngokukodwa ngokwemfuno yakho ethile. Ukusuka kuyilo lobunjineli ukuya ekugqityweni kwemveliso, Kufuneka malunga neentsuku ezingama-45-50.
2. Wenza ntoni umzi-mveliso wakho malunga nolawulo lomgangatho?
Sihlawula ngakumbi kulawulo lwekhwalithi ukusuka esiphelweni ukuya esiphelweni semveliso. Wonke umatshini uya kudityaniswa ngokupheleleyo kwaye avavanywe ngononophelo ngaphambi kokuba athunyelwe.
3. Yintoni isiqinisekiso sakho somgangatho womatshini?
Ixesha lokuqinisekiswa komgangatho ngunyaka omnye, sikhetha izinto zehlabathi ezidumileyo ukugcina umatshini wethu usesimweni esifanelekileyo.
4. Ngaba uyakwazi ukunika ufakelo kunye nokuyalela phesheya? Ingaba iza kuthatha ixesha elingakanani?
EWE, sinikezela ngenkonzo zaphesheya, kodwa kufuneka umthengi ahlawule amatikiti endiza kunye nosihotele.
Umatshini omncinci uhlala uthatha ngaphakathi kweentsuku ezintlanu.
Umatshini omkhulu uhlala uthatha malunga neentsuku ezingama-20.
5. Ndingakuthembela njani ukuba uhambise umatshini ofanelekileyo njengoko ndikuyalele?
Ngokuqinisekileyo siya kuzisa umatshini osemgangathweni olungileyo njengoko sasixoxa kwaye siqinisekisile ngokulandelelana. Eyona nto iphambili kwinkcubeko yenkampani yethu kukuvelisa izinto, umgangatho, ukuthembeka kunye nokusebenza kakuhle. U-Antai ngumthengisi wegolide we-ALIBABA's novavanyo lwe-BV kunye ne-TUV. Ungakhangela kwi-ALIBABA, asikaze sifumane nasiphi na isikhalazo kubaxumi bethu.
XA UTHENGILE, UKUZIPHATHA KWAKHONA KUPHELA IKHOMPHULE YAKHO.
Edlulileyo: Umgangatho oPhakamileyo Shot Blasting Turbines
Okulandelayo: IKhabri yoQhushululu yoSetyenziso lweSand Blasting
H umatshini wokudubula uqhushumbe, Dubula Umatshini Wokutshula, ukudubula kuqhuma iindawo zokuSebenzisa, I-Shot Blasting Wheel, Umatshini wokuqhushumba Shot, Shot Blasting Turbine, Zonke iimveliso